Jarida - Delta Injineer Belgium
Kaydso qeybta "Jarida"
Arbaco, 12 Maarso 2014 by Injineer Delta
Wareejinta qubbada wareega ee madaxyada lumay (domes) - qaab gaaban
Qulqulka buluugga ah wuxuu ka gooyaa madaxa wareega lumay (= guryaha lumay) dhalada. Waxaad ku sameyn kartaa dhalooyin leh luquntooda hoose oo waxaad ku keydisaa agabka. Wixii madaxa ilaa 80 mm dhexroor ah
Published in Jarida
Spin Trimmer madaxyada lumay (domes) - nooc dheer
Qalabka wax lagu buufiyo ayaa ka gooya madaxa wareegga wareega (= guryaha lumay) dhalada. Waxaad ku sameyn kartaa dhalooyin leh luquntooda hoose oo waxaad ku keydisaa agabka. Wixii madax ah oo ka sarreeya dhexroor 80 mm ah.
Mashiinka goynta ee madaxa wareega
Mashiinka wax jarista wuxuu gooyaa qoorta oval, afargeesle, afargeesle ((madax luntay): qaab 'aan caadi ahayn', oo aan wareegsanayn. Noocyo kala duwan ayaa la heli karaa.
Jar-goosadkan laser-ka wuxuu sameyn karaa goynta laser ee wareegga PET, PP, HDPE… dhalooyin. Waan ka goyn karaa dhumuc kasta oo derbi ah! Wuxuu ku socdaa ilaa 8000 BPH halkii laser madaxa. Soo bixidda uumiga
Xawaaraha sare ee wareejinta qubbada wareega
Xawaaraha sare ee goobeed goobeed wareega ah oo loogu talagalay dhalooyinka oo leh qubbad wareegsan oo lumay. Qaadi karaa madaxyada dhexroor qoorta ah ilaa 80 mm. Jirka dhalada wuxuu noqon karaa qaab kasta: wareeg, oval, laba jibbaaran,… Xawaare: illaa 30.000 BPH.